Ogaden News Agency (ONA) – OYSU-Xerada qaxootiga ee Xagardheere-Dhadhaab oo qabtay Maalinta hidaha Ogadenya+Sawiro
OYSU-Xerada qaxootiga ee Xagardheere-Dhadhaab oo qabtay Maalinta hidaha Ogadenya+Sawiro
Waxaa xerada qoxootiga Xagardheere kadhacay maalinti shalay ahayd xaflad aad ubalaadhan oo lagu maamuusayay habeenka hidaha iyo dhaqanka S.ogadenia. Xafladan oo ay sooqaban qaabiyeen ururka OYSU fariciisa xagardheere ayaa furantay abaare 9:00 subaxnimo xiliga bariga Africa.
Xoghayaha OYSU Xagardheere oo xalada daadihinayay ayaa sharaxaad dheer kabixiyay waxa ay xafladan kusaabsantahay iyo muhiimada ay xafladanu u leedahay shacabwaynaha ree Ogadenia wuxuuna madasha ka akhriyay qaybkamid ah hidaha iyo dhaqanka ay bulshada soomaalida Ogadenia gaarka uleedahay sida dhirta dabiiciga ah iyo magacyada geedaha wadankeena, midhaha kabaxa wadankeenii iyo magacyadooda, aqalihii ladhisan jiray iyo manaafacaadkooda iyo waliba wixii lagasamayn jiray aqaladaas.
Sidoo kale waxaa khudbado dhaadheer oo qiimo badan soo jeediyay qayb kamid ah marti sharaftii xaflada lagu casuumay oo ay kamid ahaayeen Xoghayaha OYSU Ifo halgame cabdi carab iyo Xoghayaha OYSU Dhagaxlay halgame Muuse Cismaan oo labadooduba soo jeediyay khudbado dhaxal gal ah.
Intaas kadib waxaa lagu soodhaweeyay Kooxda KACAAN oo soobandhigtay riwaayad aad cajiib u ah oo lagusoo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka ay umada ree Ogadenia leedahay waxayna kooxdu qeexeen dad badan oo da’a yar ahna tuseen sidii uu ahaan jiray dhaqankii wanaagsanaa iyo hidihii ay umadu lahayd eegana ay leedahay
Guntii iyo gabagabadii waxaa xaflada si rasmi ah usoo xidhay xoghayaha OYSU Xagardheere mudane Axmad-Naalo oo isaguna kusoo xidhay khudbad aad u qiimo badan.
Hoos ka daawo sawirada quruxda badan ee ay halkas kusoo bandhigeen.